आफ्नो नामको जग्गा अर्कैले विक्री गरेको भन्दै दमककी एक बृद्दाद्वारा न्यायको माग – सप्तरंगी एफ एम
Home / ताजा समाचार / आफ्नो नामको जग्गा अर्कैले विक्री गरेको भन्दै दमककी एक बृद्दाद्वारा न्यायको माग
आफ्नो नामको जग्गा अर्कैले विक्री गरेको भन्दै दमककी एक बृद्दाद्वारा न्यायको माग
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/१७ अशोज २०७५/डिकेश लामा
आफ्नो नामको जग्गा अर्कोले विक्री गरेको भन्दै झापाको दमककी एक बृद्दाले आज न्यायको माग गर्नु भएको छ ।
आफ्नै नामको जग्गा आफैले वेचेको कागज देख्दा मैंले कसरी जग्गा वेचे भन्ने कुरामा दमक वडा नं. ४ की ६९ बर्षीय टेकमाया मावोहाङ छक्क पर्नु भएको छ ।
आफू भारतको आसाममा छोराको घरमा गएको समयमा अर्कै मान्छेले आफ्नै नामबाट किर्ते कागज बनाएर विक्री गरेको पीडित महिला मावोहाङले बताउनु भयो । आज दमक पत्रकार मञ्चको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडितको दमक वडा नं. ४ मा रहेको किता नं. ४८७३ र ४८७५ नम्बरको जम्मा दुई विगाह ५ धुर जग्गा नक्कली धनीपुर्जा र नक्कली जग्गा धनी भई वेजिल्लाबाट विक्री गरेको बताउनु भयो ।
जग्गा धनी विना नै जग्गाको प्रतिलिपि धनिपूर्जा निकालेर जग्गा पास गर्दा काठमाण्डौं डिल्लिबजारको मालपोत र दमकको मालपोत कार्यालयको समेत मिलेमतो रहेको मावोहाङले दावी गर्नु भएको छ । जग्गा किनवेचमा जग्गा धनीको सक्कली नागरिकता समेत नहेरी फोटोकपीको भरमा किर्ते कागजको आधारमा जग्गा विक्री भएको वहाले दावी गर्नु भएको छ ।
आफूसँग भएको सक्कली धनी पुर्जा र गएको ७४ सालसम्म मालपोत तिरेको रसिद देखाउँदै पीडितका आफन्त जय प्रसाद लिम्बुले जग्गा धनीले आफूसँग धनीपुर्जा छ भनेर ढुक्कले बस्न नसकिने दिन आएको बताउनु भयो । ६९ बर्षीय मावोहाङ्गले जग्गाको आवश्यक छानविन र कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष न्यायको लागि माग समेत गरेको बताउनु भएको छ ।
उनको जग्गा मोरङ्ग जिल्लाको कानेपोखरी गाऊँपालिका वडा नं. ७ बस्ने फौदराज लिम्बुले १ करोड २० लाख रुपयाँमा खरिद गरेको मालपोतको ढड्ढामा रहेको कागजमा उल्लेख भएको पीडित पक्षले जानकारी दिएका छन् ।
Previous: वेलायतमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीद्वारा कलेजो बिरामी सुवित्रालाई सहयोग
Next: सत्ताको शक्ति , स्रोत व्यक्ति गणेश पौडेलका छोरा हिमालय माध्यमिक बिद्यालय दमकको शिक्षकमा नियुक्त